ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတဲ့လူနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့သူ နှစ်ဦးမှာ သင့်အတွက်ဘယ်သူက ပိုမိုဆွဲဆောင်မှူရှိပါသလဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတဲ့လူနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့သူ နှစ်ဦးမှာ သင့်အတွက်ဘယ်သူက ပိုမိုဆွဲဆောင်မှူရှိပါသလဲ?
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတဲ့လူနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့သူ နှစ်ဦးမှာ သင့်အတွက်ဘယ်သူက ပိုမိုဆွဲဆောင်မှူရှိပါသလဲ?
Posted by moonpoem on Jun 1, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 25 comments
အမျိုးသမီးများအတွက် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူများသည် ပျော် ရွှင်ရယ်မောနေတတ်သော အမျိုးသားများ ထက် တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာရှိသောအမျိုး သားများဖြစ်သည်ဟု သုတေသီတို့ကပြော ကြားခဲ့ကြသည်။ ထို့ အရာနှင့် ဆန့် ကျင်ဘက် အမျိုးသား များအတွက်မှာမူ ဆွဲဆောင်မှုရှိသူအမျိုးသမီး များမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သည့်အမျိုး သမီးများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်ဟူသောသတင်းကို ရန်ကုန်တိုင်းမ်(ဖလားဝါးနယူးဂျာနယ်)တွင်ဖတ်လိုက်ရသည်။
လူသားတိုင်းတွင် လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲခွင့်ရှိသည်ဟူသော အဆိုနှင့်အညီ ကျွန်မလည်း ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ်
ခပ်တည်တည်ဖြင့်ပင် သဘောထားကွဲလွဲလိုက်ပါသည်။ သင်သည် ယောက်ျားလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါပြီဆိုပါတော့
ပတ်ဝန်းကျင်က ဖြစ်စေ မိဘကသဘောတူသော (သို့မဟုတ်) သဘောကျသော မိန်းကလေးများကို တွေ့ ဘူးပါသလား။
သူတို့ သည် သူတို့ သဘောကျသော မိန်းကလေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်သည့်အခါ အဲဒီကောင်မလေးပေါ့
အနေအထိုင် သိပ်ယဉ်ကျေးတာ တော်တော်သိမ်မွေ့ တာ မိဘအပေါ်လည်းသိတတ်လိုက်တာ လိမ္မာလိုက်တာ လွန်ပါရော
စသည်ဖြင့် ပြောကြပါလိမ့်မည်။ သို့ သော် သဘောမကျသော မိန်းကလေးကို တွေ့ သည့်အခါ ဟေးလားဝါးလားနဲ့ 
သိက္ခာမရှိ တည်တည်ကြည်ကြည်မနေတတ်နဲ့ ငါ့မျက်စိထဲ ထောင့်ကို မကျိုးဘူး စသဖြင့် ကဲ့ရဲ့ ကြပါလိမ့်မည်။
ကျွန်မသည်လည်း မိမိ၏ ငယ်အကျင့်စရိုက်အတိုင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အနေအထားမျိုးဆိုထာထက် စဖို့ နောက်ဖို့ 
ဟာသပြောဖို့ လောက် စဉ်းစား နေတတ်ပါသည်။ မိဘများက အပြစ်မပြောသောလည်း အဘိုးကမူ လုံးဝ မနှစ်သက်ပါ။
မိန်းကလေးတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ကို မတူဘူး ဘယ်နှယ့် တည်တည်ကြည်ကြည်မရှိ သူကြည့်လိုက်ရင် ပြုံးစိပြုံးစိနဲ့ 
ဘာပြောပြော စဖို့ နောက်ဖို့ ပဲ သိသည်ဟုဆိုကာ အဆူခံရတတ်ပါသည်။ အားလုံးကိုခြုံပြီး ပြောရမည်ဆိုလျှင်
မြန်မာမိန်းကလေးများသည် တည်ငြိမ်အေးဆေးထက်မြက်သည့်ပုံစံသည်သာ အကောင်းဆုံးဟု ထင်ပါသည်။
မိန်းကလေးများ၏ စိတ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း မေးချင်ပါသေးသည်။ ဂျာနယ်တွင် ဖတ်လိုက်ရသည့် အတိုင်း မိမိ၏ ချစ်သူကို ရွေးချယ်မည် ဆိုပါက တည်ငြိမ်အေးဆေးသောသူက ဆွဲဆောင်နီုင်စွမ်းပိုရှိသည်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ ဒါလည်း လူတစ်ယောက်ချင်းစီနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
သူငယ်ချင်းတို့ တွေရော ဘယ်လိုပုံစံကို သဘောကျပါသလဲ၊ အေးအေးဆေးဆေးပုံစံလား၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပုံစံ လား။
တည်ကြည် အေးဆေးစွာ နေတတ်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
သြော် ဖြေတတ်ပါ့ မမနောရယ်။ သားရွှေအိုး ထမ်းလာတာ မြင်ချင်တယ်ဆိုပါတော့။ :D
ကျွန်တော်လား လူတိုင်းကိုတော့ သဘောမကျတတ်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် နှလုံးသားက လှုံ့ဆော်လာရင်တော့
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် သဘောကျမိမှာ ဖြစ်ကြောင်း …
ဘာပဲပြောပြော အရင်ဆုံး ဘဘောကျတာကတော့ချောတဲ့သူကိုပါဘဲ။ တယောက်နဲ့တယောက် အကြိုက်ခြင်းမတူပါဘူး။ ချောတာလေးကြိုက်တာချင်းကတော့တူကြမှာပါ။ ရုပ်ဆိုးတာကိုမကြိုက်ပေမဲ့ ရုပ်ဆိုးသူတိုင်းလည်း အပျိုကြီး လူပျိုကြီး မဖြစ်ပါ၊ တကယ်ကြိုက်သင့်တာကတော့ သဘောဖြူ မနောဖြူ သူကိုပါပဲ။ :)_
ဟင် ဒါဆိုရင် မနောဖြူ ………
သဘောဖြူ မနော်ဖြူ အသားဖြူမဖြူတော့မသိဘူး……..
အသားဖြူလားမဖြူလားမသိပေမဲ့ သေချာတာတော့ သွားတော့ဖြူလိမ့်မယ် အဟီး
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ သူကို သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချစ်မှာဆိုရင်တော့ သူဘယ်လိုပုံစံပဲ ရှိရှိ အချစ်မှာ အချစ်ပဲရှိပါတယ်။
လူအများရှေ့မှာ တည်တည် ကြည်ကြည်နေထိုင် တတ်ပြီး ကိုယ်နဲ့ တွေ့တဲ့ အချိန်ကျရင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ်တဲ့ သူ
ခုပြောနေကြတဲ့ အကြောင်းရဲ့ အကြမ်းဖျင်းက
မျက်နှာရဲ့ အမူအရာကို ဦးတည်ထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်
ဒါကြောင့် မျက်နှာကို ကိုယ့်ဘာသာ အဓိပ္ပါယ်တွေဖွင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်
ပြုံးတယ် ရယ်တယ် မဲ့တယ် တည်နေတယ်
ဒီမှာ နည်းနည်းလေး အနုစိတ်ကြည့်လိုက်တော့
မျက်နှာရဲ့ ( အမူအရာ ) ဟာ စိတ် ဆိုတဲ့ နာမ်တရားမှာတည်တယ်လို့လည်း
ပြုံးတယ် ရယ်တယ် မဲ့တယ် တည်နေတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးမျိုးဟာ
ထိုအမူရာလေးမျိုးစလုံးကို ကိုယ်က သရုပ်ဆောင်ထားကြတာများပါတယ်
အထူးသဖြင့် မိမိ၏ ဝင်သက်ထွက်သက် သို့မဟုတ် ဘာကိုမှ မဆင်းစားဘဲ
စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ထားနိုင်သူသည်သာလျှင် မျက်နှာရဲ့မူရင်း
ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ပြုံးတော်မူသည်လို့လည်း
ဖတ်ဘူးပါတယ် ( ပြန်ရှာကြည့်ပါဦးမည် )
အထူးပြောချင်တာက ဖေါ်ပြပါ မျက်နှာအမူအရာ လေးမျိုးစလုံးမှာ
တည်တည် နေတာရယ်နှစ်မျိုးက လူတွေပိုနှစ်သက်ကြပါတယ်
ဆိုလိုခြင်တာက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ တရားသဘောတို့အရ တက်မက်မှုကုန်၍
( ထိုတည်ငြိမ်နေတဲ့မျက်နှာကို သရုပ်ဆောင်ထားရတာဟာဆိုရင်
စိတ်သဘောအရ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခု ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို သတိချပ်ကြပါကုန် )
ကျန်တဲ့ မျက်နှာထားတွေကလည်း အတူတူပါဘဲ
ကျွန်တော် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု လို ခပ်ချောချောလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့
ဇောက်ထိုးဘဲနေနေ မှောက်ရက်ဘဲ နေနေ
နေချင်သလိုနေလည်း တွေ့တဲ့ပျိုပျိုတွေက ရင်ခုန်ကြမှာမလွဲပါဘဲ မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ။
မိန်းကလေးတွေမှာ ကလက်တာနဲ့သွက်တာဆိုတာရှိတယ်။ ကုတ်ကမြင်းနဲ့ အိနြေရှိတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ တချို့က ဖြတ်ဖြတ်နေတတ်ပေမဲ့သွက်တာ။စိတ်ဖြူတယ်။ တချို့ ဖြတ်ဖြတ်နေပြီး ကလက်တက်တက်အမူအရာရှိတယ်။ မျက်လုံးကစားတယ်။ဒါပေမဲ့ ပေါင်းသင်းကြည့်တဲ့အခါမှ အကြောင်းသိတဲ့သူရှိသလို ထိုင်ကြည့်နေရင်းလည်း ရိုးသားတယ်၊မရိုးသားဘူးဆိုတာ သိရတယ်။ နောက်ဆုံးပြောရရင်တော့ “ ပဲများတယ်” ဆိုတဲ့ စကားထွက်လာတာကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် မိန်းကလေးတွေကို လူကဲခတ်တဲ့နေရာမှာ အမျိုးသားတွေကပိုပြီးတော့တော်ကြတယ်။ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာက တကဏ္ဍပါ။ ပျိုပျို။အိုအို ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူက တစ်မျိုး။ အဲဒီဆွဲဆောင်မှုကို အသုံးချတတ်ရင်တော့ အရမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်။ဆွဲဆောင်မှုကို အလွှဲသုံးစားလုပ်ရင်တော့ တန်ဖိုးမဲ့သွားတတ်တယ်။ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းတတ်ဖို့တော့လိုတယ်။
ပဲများမများတော့မသိ ၊ဈေးတွေတော့ထိုးကျတာ အပြိုင်ပဲ၊ ငွေဈေးထက်တောင်ဆိုးသေးတယ်။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတဲ့လူနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့သူ နှစ်ဦးမှာ သင့်အတွက်ဘယ်သူက ပိုမိုဆွဲဆောင်မှူရှိပါသလဲ? လို့မေးပါတယ်.ဆို..
ခပ်တည်တည်ကြီးနဲ့ နောက်တီးနောက်တောက်လုပ်ရင်တော့ ကြောက်တယ်..
အတည်ပြောမှန်းမသိ ..စနောက်မှန်းမသိ…. ရယ်ရမလို မဲ့ရမလိုနဲ့.. ဘယ်လိုနေရမှန်းမသိလို့..
အန်တီအတွက်ကတော့ ဘယ်သူကမှဆွဲဆောင်မှုမရှိပါဘူးကွယ်။အန်တီအမြဲတမ်းမန်းနေတာတွေက အဲဒီအတိုင်းပါပဲကွယ်။။ခေါင်းစဉ်နဲ့ အမြဲကွဲလွဲနေတတ်တယ်။အဲဒါ အန်တီမေ အကျင့်ပါကွယ်။အသက်ကြီးပြီဆိုတော့လည်း အပြစ်မတင်ပါနဲ့သားရယ်
သြော်…. သား phyoshein ရယ်……
အေး ဟုတ်တယ်၊ မေးတဲ့သူကဒီမေးခွန်းအတွက်သူ့မှာအဖြေရှိပြီးသားဖြစ်ရမယ်၊ moonpoem ရောဖြေဦးလေ။
စိတ်ထဲက ဒီလိုလူမျိုးမှသဘောကျတယ်လို့ဆိုတာထက်၊ တွေ့တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ့်စိတ်က်ကြိုက်တာလေးတဲ့တွေ့ရင်စွဲလမ်းတတ်တာပဲ။ တခါတလေ အသံလေးကြားပြီးလည်းစွဲလမ်းတတ်တယ်၊ တခါတလေ အကြည့်လေးကြောင့်စွဲလမ်းတတ်တယ်၊ တခါတလေ အမူအရာကလေးကြောင့်လည်း စွဲလမ်းတတ်တယ်၊တခါတလေ အထင်ကြီးစေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် စွဲလမ်းတတ်တယ်၊ တခါတလေ သနားလို့လည်းစွဲလမ်းတတ်တယ်။
Love isabeautiful dream တဲ့။
တက်ကြွပျော်ရွှင်ပြီး သွက်လက်ချက်ချာတဲ့သူကို ပိုလိုချင်တယ်..
အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး ထုံပေပေ နေတဲ့သူက အုံးပုန်းတွေများတယ်.. ဒါကတော့ ပုံသေပြောလို.တော့မရဘူးပေါ့ ဗျာ… အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာလွယ်တာတော့ဟုတ်ဘူး.. ကိုယ်နဲ. အသွင်တူတဲ့သူ က ကိုယ်ဖူးစာရှင်ဖြစ်မှာပဲ…
အသွင်တူ အိမ်သူဖြစ် ဆိုတဲ့စကားလဲရှိတယ်လေ.. ကိုယ်အပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်…
သုံး လေး ငါး…..မျိုး
မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်စေ ယောက်ျားလေးပဲ ဖြစ်စေ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ်တဲ့လူကို သဘောကျမိမယ်ထင်တယ်။
တည်တည်နေတဲ့ကလေး ထက် ပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာချိုတဲ့ ကလေးမျက်နှာကို ပိုချစ်တတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။
အဓိကအချက်ကတော့ အသားဖွေးတာ မဲတာ ကပြသာနမရှိပါဘူး။
စိတ်သဘောထားဖြူစင်ပို့ပါဘဲ။ အရာရာသည်းခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိရင် ပြီးတာပါဘဲ။ အရာရာကိုခွင့်လွှတ်တတ် တဲ့စိတ်လေးရှိရင်အရာရာ ကိုအောင်မြင်နိုင်တတ်တဲ့လူမျိုးဆိုရင် လူ
အများကချီးကျူးရလောက်ပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ သူကို ပိုချစ်တတ်ကြပါတယ်။
ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့…. ဒါပေမယ့်ချစ်သူရှာတဲ့အခါမှာတော့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရှိတတ်သလို တစ်ချို့တလေကျတော့ ပူလောင်မှုတွေ ပေးတတ်ကြတယ်လေ… အဲဒီအချက်တွေကိုလည်း ရှောင်နိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ…
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နေတတ်တဲ့သူကကို အများကိုပိုပြီးခင်မင်ချင် တဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့နော်။
တကယ်တော့ကိုယ်လိုချင်တဲ့အချက်တွေသူ့မှာရှိပေမဲ့ သူလိုချင်တဲ့အချက်တွေရောကိုယ့်မှာရှိလားလို့ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်၊ သူလဲလူသားမို့လို့ သူ့မှာလည်းလိုချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်၊ ၂ဦးစလုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုက်ညီသွားရင်တော့ အိုကေနိုင်ပါတယ်၊ ကိုက်ညီဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်၊ မကိုက်ညီရင်တော့ အပေးအယူ အလျှော့အတင်း တွေကို သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ညှိနှိုင်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာရှိသောအမျိုးသား ကိုပဲသဘောကျတယ် …